PERIKOPA FJKM ALAHADY 13 DESAMBRA 2015 | FJKM Amboniloha
Advento III – Sampana Sekoly Alahady
Mpitsara 13.8-25 / Matio 21.12-17 / Romana 4.13-25
8 Ary Manoa nangataka tamin’i Jehovah ka nanao hoe: Ry Tompo ô, aoka hankatỳ aminay indray ny lehilahin’Andriamanitra, ilay efa nirahinao, ka hampianatra anay ny hitondranay ny zaza izay ho teraka.
9 Ary Andriamanitra nihaino ny feon’i Manoa, ka dia nankany amin-dravehivavy indray Ilay Anjelin’Andriamanitra, raha tany an-tsaha izy; fa Manoa vadiny tsy teo aminy.
10 Dia nihazakazaka faingana ravehivavy ka nanambara tamin’ny vadiny hoe: Indro, niseho tamiko indray ny lehilahy izay tonga tamiko tamin’ilay indray andro.
13 Ary hoy Ilay Anjelin’i Jehovah tamin’i Manoa: Izay rehetra efa nolazaiko tamin-dravehivavy dia aoka hotandremany avokoa.
14 Izay rehetra avy amin’ny voaloboka dia aza avela hohaniny, ary aza avela hisotro divay na toaka izy, na hihinana akory izay zava-padina; izay rehetra nandidiako azy dia aoka hotandremany avokoa.
15 Ary hoy Manoa tamin’Ilay Anjelin’i Jehovah: Aoka mba hotananay Hianao mandra-pamboatray zanak’osy ho Anao.
16 Dia hoy Ilay Anjelin’i Jehovah tamin’i Manoa: Na dia tananao aza Aho, tsy mba hihinana amin’ny haninao Aho tsy akory; fa raha hanatitra fanatitra dorana ianao, dia aoka Jehovah no hanateranao izany. Fa tsy fantatr’i Manoa ho Anjelin’i Jehovah Izy.
17 Dia hoy Manoa tamin’Ilay Anjelin’i Jehovah: Iza moa no anaranao, mba hanomezanay voninahitra Anao, rehefa tanteraka ny teninao?
18 Ary hoy Ilay Anjelin’i Jehovah taminy: Nahoana no manontany ny anarako ianao? Fa anarana mahagaga izany.
19 Dia naka ny zanak’osy sy ny fanatitra hohanina Manoa ka nanatitra ireny teo ambonin’ny vatolampy ho an’i Jehovah; ary Ilay Anjely kosa nanao zava-mahagaga, raha mbola nijery teo Manoa mivady.
20 Ary raha niakatra ho amin’ny lanitra ny lelafo avy teo amin’ny alitara, dia niakatra teo anatin’ny lelafo avy teo amin’ny alitara Ilay Anjelin’i Jehovah. Ary nijery izany Manoa mivady, ka dia niankohoka tamin’ny tany.
21 Ary tsy niseho tamin’i Manoa sy ny vadiny intsony Ilay Anjelin’i Jehovah; dia fantatr’i Manoa fa Anjelin’i Jehovah Izy.
22 Ary hoy Manoa tamin’ny vadiny: Ho faty tokoa isika, satria efa nahita an’Andriamanitra.
23 Fa hoy ny vadiny taminy: Raha sitrak’i Jehovah ny hahafaty antsika, dia tsy ho nety nandray fanatitra dorana sy fanatitra hohanina tamin’ny tanantsika akory Izy, ary tsy ho nampahita antsika izany zavatra rehetra izany, ary tsy ho nampandre antsika izany zavatra izany ankehitriny.
25 Dia niantomboka nanindry azy indraindray ny Fanahin’i Jehovah tany Mahane-dana*, teo anelanelan’i Zora sy Estaola.[Mahane-dana = Tobin’i Dana]
12 Ary Jesosy niditra teo an-kianjan’ny tempolin’Andriamanitra, dia nandroaka izay rehetra nivarotra sy nividy teo an-kianjan’ny tempoly ka nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan’ny mpivarotra ny voromailala;
13 dia hoy Izy taminy: Efa voasoratra hoe: Ny tranoko hatao hoe trano fivavahana (Isa. lvi. 7); fa ianareo kosa manao azy ho zohy fieren’ny jiolahy (Jer. 7. 11).
14 Ary nisy jamba sy mandringa nanatona Azy teo an-kianjan’ny tempoly, dia nahasitrana azy Izy.
15 Fa nony hitan’ny lohan’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ny zavatra mahagaga izay nataony sy ny ankizy madinika miantso eo an-kianjan’ny tempoly ka manao hoe: Hosana ho an’ny Zanak’i Davida! – dia tezitra izy
16 ka nanao taminy hoe: Renao va izay lazain’ireo? Dia hoy Jesosy taminy: Eny; tsy mbola novakinareo va ny teny manao hoe: Avy amin’ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana (Sal. 8. 2)?
13 Fa tsy lalàna, fa fahamarinana amin’ny finoana, no nahazoan’i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy.
14 Fa raha izay amin’ny lalàna no mpandova, dia efa foana ny finoana, ary efa tsinontsinona ny teny fikasana;
16 Koa finoana no andovana, mba ho araka ny fahasoavana, hahatò ny teny fikasana ho an’ny taranaka rehetra,- tsy ho an’izay amin’ny lalàna ihany, fa ho an’izay amin’ny finoan’i Abrahama koa, dia ilay razantsika rehetra –
17 araka ny voasoratra hoe: Nataoko ho rain’ny firenena maro ianao (Gen. 17. 5) – teo anatrehan’izay ninoany, dia Andriamanitra Izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy.
18 Ary na dia efa tsy nisy fanantenana aza, dia nanantena ihany izy ka nino, mba ho rain’ny firenena maro; araka ny voalaza hoe: Ho tahaka izany ny taranakao (Gen. 15. 5).
19 Ary satria tsy mba nalemy finoana izy, dia nihevitra ny tenany izay efa hoatra ny maty (fa efa tokony ho zato taona izy) sy ny fahafatesan’ny kibon’i Saraha,
20 ary tsy niahanahana ny amin’ny teny fikasan’Andriamanitra tamin’ny tsi-finoana izy, fa nampaherezin’ny finoana ka nanome voninahitra an’Andriamanitra
24 fa ho antsika izay hanisana izany koa, dia isika izay mino Ilay nanangana an’i Jesosy Tompontsika tamin’ny maty,
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 10 décembre 2015